Waa maxay faa'iido leh Veronica officinalis
Ugu Weyn Ee Veronica officinalis
Grass Veronica waxaa loo isticmaalaa ma aha oo kaliya daaweynta cudurrada ama ka hortagga. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii xilli jimicsi loogu talagalay koorsooyinka labaad, oo lagu darey liishooyinka iyo calaamadaha iyo isticmaalka wax soo saarka qurxinta. Intaa waxaa dheer, waxay muddo dheer ahayd macquul caan ah ee daawada dhaqameed, inkasta oo aan waa in aan sheego in farmasiyada dhaqameed ee gudaha ay dhaaftay.
Waxaan ku loolameyn karnaa baradho
Sida loo kala saaro kaabajka Amager: sharaxaada noocyada kala duwan
Doorashada waqtiga ugu wanaagsan ee ubaxyada ubaxsan
Calendar Calendar Lunar Seed ee April 2019
Daryeel iyo kobcinta qoryaha
"Qasab" waa nooc cusub oo dufan badan oo dhoobo ah. Maqaalkani, waxaan kugu martiqaadaynaa in aad barato sharaxaadda noocan ah pear, kala hadal farsamooyinka iyo xayawaanka, sidoo kale waxaad baran kartaa qaar ka mid ah xeerarka muhiimka ah ee daryeelidda geed. Taariikhda bilaabista "Qasnadda" - waa fikrad cusub oo xulashada koonfurta. Kala duwan ayaa laga helay Machadka Cilmi-baarista Farsamada Cilmi-baarista ee Moldavian of Chorticulture, Viticulture iyo Winemaking. Read More
Baraf badan oo Jarmal ah "Veneta" sharaxaad kala duwan, sifooyinka, sawirada
Kalmiya Broadleaf: sifooyinka beeraha ee xaafadaha
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Veronica officinalis 2020